भारतले नाकाबन्दीको लागि माफी मागेको छैन, हाम्रो संविधानलाई स्वागत गरेको छैन तेसैले भारतको कुरा पत्याइँन्न- रबि::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
भारतले नाकाबन्दीको लागि माफी मागेको छैन, हाम्रो संविधानलाई स्वागत गरेको छैन तेसैले भारतको कुरा पत्याइँन्न- रबि
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच विविध बिषयमा सहमती भएसँगै १२ बुँदे संयुक्त बक्तव्य जारी भएको छ । सबै बुँदामा नजाऔं, मुलुभुत ३ बिषयमा जाऔं । एक रक्सौल काठमाडौं रेल लिंक लगायत जनकपुर जयनगर र जोगवनी विराटनगर रेल मार्ग ।
दुई, कृषि क्षेत्रमा साझेदारी र तिन जलमार्ग अर्थात पारवाहनमा समुद्रसम्म नेपालको पहुँच । यहाँ बुँदा-बुँदा भित्र छिरेर त्यसको समालोचना गर्न खोजिएको छैन तर हरेक पटक प्रधानमन्त्रीहरु जाँदै सहमतिहरु गर्दै गर्दा केही सहमति, सम्झौताहरुको चिरफार त गर्नै पर्छ । पुराना कुरा न सच्चाए वा पुनरावलोकन गरी तिनलाई अध्यावधिक नगरेसम्म नयाँ कुरा पत्याइँन्न । यो भारतको विरोध होइन नेपालको माया हो । सर्वप्रथम भारत मित्र राष्ट्र बन्नको लागि १९ सय ५० को सन्धी सच्याउन परेन ?
भोट खसाल्दा त बराबरी हैशियत हो नी । नयाँ सहमतीहरुलाई स्वागत गर्दा गर्दै केही पुराना सहमतीहरु पनि पालना हुनु परेन । भुकम्पका बेला दाता सम्मलेनमा वाचा गरिएको रकम नेपालले पाएको छैन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैले भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने भनेको लागु भएन ।
हाम्रा डेलीगेट्सहरुले संझाउन छुटाउलान, तर दुतावासले हाम्रो यो जेन्टल रिमाइन्डरलाई नोट गरोस भनेर सुनाएको नी । हुन त हाम्रो संविधानलाई स्वागत गरेको पनि सुनिएको छैन,नाकाबन्दी लगाएकोमा पनि माफी मागीएको छैन । यसरी बेला बेलामा सम्झाइएन भने, हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर, अपर कर्णाली जस्तै विर्सीने डर हुन्छ । कोही कोही यति मै तर्सेर हैरान छ ।
ठुलो देश हो ठुला कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ, त्यसैले सानासना सहमतिहरु बिर्सिनु स्वभाविक हो । त्यसैले यसरी सम्झाउनु जरुरी छ । राजनीतिक दलले भारतको आलोचना गर्ने त प्रतिपक्षमा बस्दा मात्रै हो ।
सौतेनी ब्याजको पासोमा पार्ने प्रदेशी पक्राउ
सर्लाहीका सयौँ स्थानीयलाई सौतेनी ब्याजको पासोमा पारेर आंतक मच्चाइरहेको श्याम कृष्ण शाह अर्था श्याम परदेशीले आफ्नै घरमा काम गर्ने १४ बर्षीय किशोरलाई यौन दुरव्यवहार गरेको पीडित बालिकाले आरोप लगाएकी छिन् । परिवारले लिएको १ लाख २५ हजार रुपैयाकै कारण उनि ७ बर्षदेखि श्याम परदेशीको घरमा काम गर्दै आएकी थिइन । यो बिचमा उनलाइ पटक ऋण मिनाह गरिदिने भन्दै यौन शोषण गरेको उनको अरोप छ । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा सुरुमा उजुरी लिन नमानेको उनको गुनासो छ । तर अहिले भने पीडित किशोरीको उजुरुरी लिएर श्याम परदेशीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए ।
पीडित किशोरीलाई लिएर स्थानीय महिलाहरु जिल्ला प्रसासन कार्यालयमै पुगेर कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवालले किशोरो माथीको हिंसाको मृुद्धामा प्रहरी दर्ता भएसँगै कारबाही गर्ने बताएका छन् । ऋण मिनाहा गर्ने भन्दै छोरीको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने श्याम परदेशीलाई कडा कारवाही माग गर्छीन ।